Umqondo kaB | Isingeniso esikhulu ezweni elixakekile
Uxolo uthuli lwethu! Ibhulogi le-MoB lenza izibuyekezo ezithile ngenkathi ubhekabheka!
Kuyini iSupro Introvert?
Ezempilo & Ukuzinakekela
Ukuphila kahle nokugula
Ukunakekelwa Kwezinwele Okugobile
Ukuphila nokuthanda njengesethulo esizwelayo nokuzwela ezweni elibabazekayo
Ufuna okuthile? Sesha noma yini bese ushaya u-enter.
Ukuphila Ngokulula Ongashadile Nabo Abathandanayo
Mid-30s, Owesifazane, Ongashadile futhi Omangalisayo
Into yokugcina engangihlose ukuyenza ukuqala kabusha ibhulogi yami ngomsindo ngaphezulu kwenye ibhulogi. Kepha lapho ngibona isihloko se-Vogue.com sihloko esabiwe ku-Twitter emasontweni ambalwa edlule, amabhisikidi ami asha kakhulu. “Ngibe Nguye Njani Ekugcineni Umuntu Ongashadile Eqenjini Lami?” U-Aka, “Mid-30s and Single: Ngabe Ngilinde Isikhathi Eside Ukuthi…
Impilo Engokwengqondo Nokomzwelo Isingeniso Esiphezulu
Izinsuku Eziphansi nokuthi Ungabhekana Kanjani Nazo
Nakanjani. Ngiyazizonda izinsuku. Ziyini izinsuku eziphansi? Izinsuku ezingezansi yilezo zikhathi lapho ungena ekhanda lakho ngaphezu kwento engasho lutho futhi eyisiphukuphuku. Mhlawumbe ukhohlwe okuthile esitolo, manje uzofika sekwephuzile emcimbini. Noma mhlawumbe umngani akakushayelanga ucingo ngesikhathi uzizwa ukuthi udinga owabo…
Into Enkulu Kunazo Zonke
Into Enkulu Kunazo Zonke # 1: I-GreenBeauty
Ngonyaka odlule, enhliziyweni yokuhlukaniswa kwe-COVID-19, ngacubungula kunanini ngaphambili kwizinsizakusebenza eziku-inthanethi zokunakekelwa kwezinwele zemvelo. Ukuba sekhaya kunginike isikhathi esengeziwe sokwenza lokho, futhi ngangazi ukuthi angingedwa. Abangane, umndeni, osebenza nabo, izinkundla ze-inthanethi – cishe wonke umlimi wezinwele engangikwazi ngaye wayenqume ukuvumela ukukhiya kwabo kukhule ngokuncane…
Okungabonakali kanye nokubhinqa
Ukubuyisa iBlog (aka Happy New Year!)
Sanibonani, nonke, futhi nijabule, Jabulela unyaka omusha! Ngicabanga ukuthi sonke singavuma ukuthi asidumele kakhulu ukubona u-2020 ehamba. Kepha ngubani owaziyo - mhlawumbe abanye bethu bayazi. Ngiyazi ukuthi sonke simagange ukubeka izinsuku zokugcina ezingama-365 emuva kwethu, kodwa ukuqinisekisa ukuthi siyakhumbula ukuthi kungani sikuthokozela kakhulu ukuqala konyaka omusha,…
Umqondo Wokuthola Umsebenzi Wakwa-B Wenziwe – Futhi
Ngizokwenza lokhu kusheshe futhi kungcolise. Njengeqembu, sonke besidlule onyakeni owodwa kuze kube manje ngo-2020. Ngamunye, ngicabanga kuphela ukuthi ubhekene nani – nokuzizwa, phezu kwakho konke okwenzekayo. Ngokuqondene nami, kube yingqophamlando yama-coasters wengqondo, womzwelo, kanye nomzimba wabaningi kangaka…
Impilo Engokwengqondo Nokomzwelo Okungabonakali kanye nokubhinqa
Ngifisa sengathi Izilo Zingama
Kubusuku besibili ngokulandelana, kwenzeke. Ngalesi sikhathi, ngangimi ekhishini lami ngithinta i-Google Home yami ukuthi ngingancibilikisa isikhathi esingakanani ngokuphepha inyama eluhlaza ekamelweni lokushisa ngaphambi kokuba amabhaktheriya aqale ukukhula. Okwamanje ukukhala, i-alamu yokuxwayisa umphakathi yagqobhoza isikrini esikhiyiwe se-smartphone yami njengoba yayihleli egumbini lokuphumula, ngi…
Izithako Zemvelo Izinwele Zami IZINZONDO (Zakho Kungenzeka, Kakhulu)
Kulungile, kulungile – ngakho-ke lokhu akuyona iposi lebhulogi elijabulisa kakhulu noma elinamandla ukubuyela ekugelezeni. Kusebenza kimi okwamanje. Ngalesi sikhathi lapho ukuhlala ekhaya kuwusizo kimi nakubo bonke abanye abantu, ngiba nesikhathi esiningi sokucabanga ngendlela engiphila ngayo. Abangani bami nomndeni wami…
Impilo Engokwengqondo Nokomzwelo Ukuphila Ngokulula
Sikufisela usuku oluhle lwabesifazane !!!
Ngingathanda ukucabanga ukuthi Isikhathi Sokonga Kwemini besilangazelela njengathi sonke ukuqala lolu suku oluhle — lolu suku lapho (yize kufanele silugubhe nsuku zonke) sigubha ngokusemthethweni abesifazane yonke indawo. Njengowesifazane, ngihlale ngilwa nobuyena — okusho ukuthi, ngingaba kanjani ngowesifazane ongcono kakhulu engingaba yikho? Ngiyazama…
Ongashadile Nabo Abathandanayo
Izindlela Esithandana Nazo
Ngikuthanda kanjani? Ake ngibale izindlela. U-Elizabeth Barrett Browning bekufanele ngabe ngibonile kudala ukuthi izinto ezihlanyayo kuphela ezenzeka ngehora le-11 ebusuku. Kimi, bengizama ukuqedisa umatilasi osayizi wendlovukazi embhedeni ngebhokisi emnyango wami wangaphambili, njengoba ngangilinde omunye wabangani bami ukuba eze emva komsebenzi angisize…
Ukuzinakekela Ukuphila Ngokulula
2020: Unyaka wezixazululo kanye nezinguquko
Chofoza lapha ukuze uqonde ngqo kuzinqumo zami zonyaka omusha wezi-2020! Kuyisambulo esithokozisayo ukubona kahle lapho usumdala ukuthi awushintshi, uhlakaniphe ubuntu, kusukela useyingane. Ukube ubuhlanzekile usengumntwana, ngokubeka ngokwemvelo ukubeka amathoyizi akho ngemuva kokudlala, mhlawumbe usathola injabulo enkulu ekugcineni lolo hlanzeko ku…
Siyakwamukela ku-Mind of B
Igama lami nginguBrandee. Ngingumbhali, umhloli wokuhlola ozimele, nofisa umlingisi wezwi. Futhi ngingumuntu ozwelayo kakhulu, onozwela, kanye nomuntu ongenisa ulwazi osezingeni eliphezulu.
Le bhulogi ilandisa ngenjabulo yami kanye nokuzabalaza kwami ​​ukuthola ibhalansi yokuphila njengowesifazane oyedwa wase-Afrika-waseMelika onothando lokusungula izinto, impilo yengqondo, nokunakekelwa kwezinwele zemvelo, kuyilapho ngihlala ngiqinisile "ekungeneni kwami ​​​​okukhulu".
Ukuba yi-Super Introvert
I-Ayurveda ne-My Hair Regimen
Kwangathi 20, 2012
FictionOkungabonakali kanye nokubhinqaLapho Kubhalwa
Ama-Classical Literary Classics ama-5 (Amahle) angaphansi kwamakhasi angama-200
Okungabonakali kanye nokubhinqaLapho KubhalwaIsingeniso Esiphezulu
Iziphambeko Zokuba Umlindi Wabantu
Mashi 2, 2014
Ukuphila NgokululaOngashadile Nabo Abathandanayo
Ungazigcina Kanjani Ukuze Ungabi Yisiphukuphuku Ngenxa Yesikhukhula
Imemori Yesikhathi Eside (Izinqolobane)
Imemori Yesikhathi Eside (Izinqolobane) Khetha Inyanga Januwari 2021 (2) Juni 2020 (2) Kwangathi 2020 (1) Mashi 2020 (2) Januwari 2020 (1) Novemba 2019 (2) Okthoba 2019 (4) Septhemba 2019 (5) Julayi 2019 (2) Juni 2019 (2) Kwangathi 2019 (3) Januwari 2019 (4) UDisemba 2018 (3) Novemba 2018 (3) Okthoba 2018 (2) Septhemba 2018 (5) Agasti 2018 (4) Julayi 2018 (3) Juni 2018 (2) Kwangathi 2018 (3) Agasti 2017 (2) Agasti 2016 (1) Julayi 2016 (1) Kwangathi 2016 (1) Ephreli 2016 (1) Septhemba 2015 (3) Mashi 2015 (2) Agasti 2014 (1) Juni 2014 (1) Ephreli 2014 (2) Mashi 2014 (1) Januwari 2014 (1) Novemba 2013 (2) Okthoba 2013 (7) Februwari 2013 (1) Januwari 2013 (1) Okthoba 2012 (1) Septhemba 2012 (7) Agasti 2012 (6) Julayi 2012 (1) Juni 2012 (1) Kwangathi 2012 (3) Ephreli 2012 (1) Mashi 2012 (2) Februwari 2012 (6) UDisemba 2011 (1)
Ufuna imiyalo yakudala yokubhala nokuthunyelwe okuhlobene nencwadi? Chofoza isithombe.
wesabe ukujabula (4) wesaba ukubhala (5) abesifazane abangabodwa abangabazekayo (3) Uhlobo lwezinwele ze-ayurvedic lwabaqalayo (4) ukuba ngumbhali (6) ukuba umuntu ongcono (7) ukujabula (10) ukunakekelwa kwezinwele ezisontekile (6) ukubhekana nemizwa (9) ukubhekana nenzondo (4) Ingabe abantu bayangithanda (3) Izinsuku eziphansi (3) ukubhala kwamahhala (7) izinwele 4c (8) amathiphu okukhula kwezinwele zezinwele zemvelo (4) isethulo esibucayi kakhulu (5) ngingajabula kanjani (5) Ngingathola kanjani ukulala okuningi (3) Ngiyazithanda izinwele zami (5) Ngiyakuthanda ukubhala (13) ugqozi lokubhala (3) kubhala kanzima (4) Ngifuna ukujabula (3) uthando olulahlekile (3) uthando lolimi test (3) thanda ibhulogi (7) ingqondo ka-b (19) uthando olulahlekile (3) izinwele zemvelo (10) imikhiqizo yezinwele zemvelo (3) ukuba nokuthula (5) ukuthula (14) owesifazane omnyama ongashadile (3) ukushayela kwangesonto (4) isingeniso esikhulu (9) owabaleka (3) ngizama ukulungisa yonke into (4) ngiyoze ngikhulise izinwele ezinde (3) ibhulokhi yombhali (6) ikhambi lokuvimba lombhali (4) usizo lombhali (3) Umbhali ukuvimba kabusha (3) yekubhala (7) ukuzibhalela (9) isivinini sokubhala (8)
Thola okuthunyelwe okusha ebhokisini lakho lokungenayo lapho beshicilela kusayithi!
© Copyright 2022 Umqondo kaB. Wonke Amalungelo Agodliwe. IBlossom Pin Pro | Kuthuthukiswe ngu Izindikimba eziqhakaza. Inikezwe amandla yi WordPress.